Hello Nepal News » ‘बेस्ट फर्म’मा रहेका टप–५० खेलाडीको सूची सार्वजनिक : रोनाल्डो टप–१० मै छैनन् !
‘बेस्ट फर्म’मा रहेका टप–५० खेलाडीको सूची सार्वजनिक : रोनाल्डो टप–१० मै छैनन् !
पछिल्लो समय क्लब तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा समेत उच्च प्रदर्शन गरिरहेका खेलाडीहरूको सूची सार्वजनिक भएको छ । ‘फुटबल क्रिटिक’ले एक अध्ययन रिपोर्ट जारी गर्दै टप–५० खेलाडीको सूची प्रकाशित गरेको छ । यो सिजन हालसम्म खेलाडीले गरेको समग्र प्रदर्शन, गोल संख्या र अन्य तथ्यांकका आधारमा यस्तो सूची प्रकाशित गरेको हो । जसमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी पछिल्लो समय उच्च प्रदर्शन गर्नेको सूचीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेका छन् । यता, इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने यो सूचीको टप–१० मा पनि परेका छैनन् । जबकि, यो सिजन यी दुई खेलाडीको गोल संख्या तुलना गर्ने हो भने पहिलो स्थानमा रहेका मेस्सीभन्दा रोनाल्डो अघि छन् । तर, मेस्सी १ नम्बरमा पर्दा रोनाल्डो भने १२औं स्थानमा मात्रै रहेका छन् । यो भिन्नतालाई आश्चार्यजनक मानिएको छ । त्यत्ति मात्रै हैन, यो सूचीमा अरू थुप्रै यस्ता नाम छन्, जसले आम फुटबल समर्थकलाई नै अचम्ममा पार्नेछ । अध्ययन रिपोर्टले प्रकाशित सूचीका लागि ठ्याक्कै कुन अवधिका लागि भनेर नतोकी ‘वर्तमान समयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
यो सिजन २०२०–२१ को यहाँसम्म आइपुग्दा मेस्सीले हालसम्म ३२ खेल खेल्दै २४ गोल गरेका छन् भने ८ असिस्ट पनि गरेका छन् । यता, रोनाल्डोले भने यो सिजन हालसम्म कूल २९ खेलबाट कूल २७ गोल गर्दै ७ गोलमा असिस्ट प्रदान गरेका छन् । व्यक्तिगत तथ्यांक हेर्दा यो सिजन रोनाल्डोले मेस्सीको भन्दा ३ खेल कम खेलेर पनि ३ गोल बढी गरेका छन् । यो सिजन ३६ वर्षका रोनाल्डो सिरी ए लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् भने ३४ वर्षका मेस्सी ला लिगाको सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । दुवैले आ–आफ्नो टिम र लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई कायमै राखेका छन् । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका पनि मेस्सीको भन्दा रोनाल्डोको व्यक्तिगत प्रदर्शन र तथ्यांक निकै राम्रो रहेको थियो । सार्वजनिक सूची खेलाडीको क्लब तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनलाई समेत आधार मानेर तयार पारिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । वर्ष २०२० मा रोनाल्डोले पोर्चुगलको टोलीबाट ६ खेल खेल्दै ३ गोल र २ असिस्ट गरेका थिए । यता, मेस्सीले अर्जेन्टिनाको टोलीबाट मेस्सीले ४ खेलबाट १ गोल मात्रै गरेका थिए ।
यता, यो सूचीको दोस्रो स्थानमा फ्रेन्च क्लब पिएसजी तथा ब्राजिलका स्टार नेइमार छन् । जबकि, नेइमारले त यो सिजन चोटका कारण धेरै खेल्न पनि पाएका छैनन् । उनी पटक–पटक घाइते हुँदै आएका छन् । अहिले पनि चोटकै कारण टोलीबाहिर रहेका छन् । उनले हालसम्म यो सिजन १७ खेल खेल्दै १३ गोल र ३ असिस्ट मात्रै गरेका छन् । त्यसपछि तेस्रो स्थानमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्ड तथा नर्वेका युवा स्टार अर्लिङ हल्यान्ड रहेका छन् । गत सिजनजस्तै यो सिजन पनि शानदार लयमा रहेका उनले यो सिजन २६ खेलबाट २७ गोल र ६ असिस्ट गरेका छन् । उनी यो सिजन बुन्डेसलिगामा पनि सर्वाधिक गोलकर्ताको दौडमा छन भने युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा त कूल ८ गोलसहित एकल सर्वाधिक गोलकर्ता रहेका छन् । यता, यो सिजन युरोपियन गोल्डेन बुटको दौडमा २ गोलसहित सबैभन्दा अगाडि रहेका जर्मन क्लब बार्यन म्युनिख तथा पोल्यान्डका रोवर्ट लेवान्डोस्की त मुस्किलले १३औं स्थानमा मात्रै छन् ।
अर्को आश्चार्यको कुरा त यो छ कि, यो सूचीमा फ्रेन्च क्लब पिएसजी तथा फ्रान्सका युवा स्टार केलियन एमबाप्पे टप–५० सूचीको पुछारतिर ४२औं स्थानमा मात्रै छन् । उनले यो सिजन सबैखाले प्रतियोगितामा कूल २३ गोल र ७ असिस्ट गरेका छन् । इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडका पोर्चुगिज प्ले मेकर ब्रुनो फर्नान्डेज २७औं स्थानमा रहेका छन् । बार्सिलोनाका डच मिडफिल्डर फ्रेन्की डे जोङ पिएसजीका एमबाप्पेभन्दा पनि अगाडि रहेका छन् । रियल मड्रिडका कप्तान तथा डिफेन्डर सर्जियो रामोस निकै अघि २७औं स्थानमा छन् । चौथो स्थानमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्ड तथा इंग्ल्यान्डका जाडोन सान्चो रहँदा पाँचौं स्थानमा स्पेनिस रियल मड्रिड तथा जर्मनीका टोनी क्रुस रहेका छन् । छैटौं स्थानमा स्पेनिस क्लब सेल्टा भिगो तथा स्पेनका इयागो आसपास रहेका छन् । इंग्लिस क्लब लिभरपुल तथा इजिप्टका मोहमद सालाह र स्पेनिस रियल मड्रिड तथा फ्रान्सका करिम बेन्जेमा क्रमशः सातौं र आठौं स्थानमा रहेका छन् । हेरौं टप–५० सूची:
50. Diogo Jota (Liverpool)
49. Manuel Locatelli (Sassuolo)
48. Lars Stindl (Borussia Monchengladbach)
47. Fabinho (Liverpool)
46. Gerard Moreno (Villarreal)
45. Juan Cuadrado (Juventus)
44. Aymeric Laporte (Manchester City)
43. Jordi Alba (Barcelona)
42. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
41. Thomas Muller (Bayern Munich)
39. Kevin De Bruyne (Manchester City)
38. Bernardo Silva (Manchester City)
37. Oleksandr Zinchenko (Manchester City)
36. Wout Weghorst (Wolfsburg)
35. Kurt Zouma (Chelsea)
34. Frenkie de Jong (Barcelona)
33. Leon Goretzka (Bayern Munich)
32. Jack Grealish (Aston Villa)
31. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)
30. Ederson (Manchester City)
29. Kyle Walker (Manchester City)
28. Ilkay Gundogan (Manchester City)
27. Bruno Fernandes (Manchester United)
26. Cesar Azpilicueta (Chelsea)
24. Nick Pope (Burnley)
23. Antoine Griezmann (Barcelona)
22. Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach)
21. Rodri (Manchester City)
20. Yassine Bounou (Sevilla)
19. Cristian Romero (Atalanta)
16. Andre Silva (Eintracht Frankfurt)
15. Joao Cancelo (Manchester City)
13. Robert Lewandowski (Bayern Munich)
11. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)
10. John Stones (Manchester City)
6. Iago Aspas (Celta de Vigo)
प्रकाशित मिति २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १३:०६